Pyrolysis: inona izany, toetra, inona ary tombontsoa | Green Renewable
Ny dingan'ny pyrolysis na pyrolytique, fantatra ihany koa, dia dingana iray izay mahatonga ny fahapotehan'ny biomass amin'ny hetsika hafanana tsy mila oksizenina, izany hoe ao anaty rivotra maina tanteraka izany. Ny vokatra miforona vokatry ny pyrolysis dia mety ho solida, ranon-javatra ary entona, ary mifanaraka amin'ny vokatra toy ny arina na saribao, tara ary farany ny vokatra entona malaza na etona saribao. Ity dingana ity dia mety hitranga irery eo amin'ny natiora na miaraka mandritra ny fandoroana na ny fandoroana entona.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny pyrolysis, ny toetrany ary ny maha-zava-dehibe azy.
2 Karazana pyrolysis
3 Inona no atao hoe pyrolysis ao an-dakozia?
4 Tombontsoa amin'ny lafaoro sy ny maha zava-dehibe ny tontolo iainana
Ny pyrolysis dia fitsaboana thermochemical izay Azo ampiharina amin'ny vokatra organika mifototra amin'ny karbonina. Ny fitaovana dia tratran'ny hafanana avo, raha tsy misy oksizenina, misaraka ara-tsimika sy ara-batana ho molekiola miavaka.
Ny pyrolysis dia endriky ny thermolysis ary azo faritana ho ny fahapotehan'ny hafanana izay iainan'ny akora iray raha tsy misy oksizenina na karazana reagent. Ny fahapotehana dia mety ho vokatry ny andiana fanehoan-kevitra simika sy fizotry ny hafanana sy faobe. Azo faritana ihany koa ho ny dingana atao alohan'ny fandoroana sy ny fandoroana.
Rehefa miseho amin'ny endriny faratampony izany, karbônina sisa tavela, izay antsoina hoe charring. Amin'ny alàlan'ny pyrolysis dia afaka mahazo vokatra faharoa samihafa izay mahasoa amin'ny sehatra ara-teknika isika. Ny vokatra pyrolysis dia mamokatra gazy mivaingana foana toy ny karbônina, ranon-javatra ary gazy tsy azo tsapain-tanana toy ny H2, CH4, CnHm, CO, CO2 ary N. Koa satria ny gazy pyrolysis dia alaina avy amin'ny gazy pyrolysis mandritra ny fampangatsiahana azy, ny gazy roa dia mamoaka gazy roa. azo ampiasaina miaraka amin'ny fampiharana sasany izay atolotra mivantana ny syngas mafana any amin'ny efitrano fandoroana na oxidation.
Misy karazany roa ny pyrolysis arakaraka ny toe-batana anaovana azy:
pyrolysis rano: Ity teny ity dia ampiasaina rehefa ilaina ny manondro ny pyrolysis izay mitranga amin'ny fisian'ny rano, toy ny fiparitahan'ny etona amin'ny menaka na ny depolymerization mafana amin'ny sisa tavela amin'ny menaka mavesatra.
Vacuum pyrolysis: Ity karazana pyrolysis banga ity dia misy ny famafazana akora organika ao anaty banga mba hahazoana teboka mangotraka ambany sy hisorohana ny fanehoan-kevitra simika tsy mety.
Ny fizotran'ny pyrolysis dia mizara ho dingana telo, toy izao manaraka izao:
Ao amin'ny dingana voalohany misy simba miadana miaraka amin'ny famokarana rano kely, oksidin'ny karbônina, hydrogen ary metana. Ity fanimbana ity dia vokatry ny fahatapahan'ny fatorana noho ny hafanana ambony amin'ny dingana sy ny famoahana entona voafandrika ao anaty arina.
Ny dingana faharoa dia antsoina dingana fahapotehana mafana mafana. Miakatra ny mari-pana mandritra io dingana io ary mirodana lalindalina kokoa ny molekiola karbônina, ka mamorona hydrocarbons sy tara. Ity dingana ity dia manomboka amin'ny 360º C ary mifarana rehefa mahatratra 560º C eo ho eo.
Ny dingana farany dia mitranga amin'ny mari-pana mihoatra ny 600ºC ary miavaka amin'ny fanjavonana tsikelikely ny hydrogène sy ny heteroatom hafa.
Inona no atao hoe pyrolysis ao an-dakozia?
Rehefa ao an-dakozia isika dia mila manana fitaovana ilaina hanamora ny fiainantsika, ary ny fananana lafaoro manara-penitra no tena mety amin’izany. Misy lafaoro isan-karazany amin'izao fotoana izao misy fiasa manadio tena, antsoina hoe lafaoro pyrolysis, izay ny tena asany dia ny manadio tena.
Ity karazana fatana ity Izy ireo dia afaka mampiakatra ny mari-pana hatramin'ny 500 ° C, manimba ny sisa tavela amin'ny sakafo ao anatiny, mamadika azy ho etona na lavenona, ary koa manala ny fofona tsy mahafinaritra rehefa avy mahandro ao anaty lafaoro. Izany hoe, ny sakafo sisa tavela, noho ny hafanana ambony, dia mamadika ny zavatra organika ho gazy karbonika, izay, rehefa niova ho rano, dia lasa etona; toy izany koa, ny zavatra tsy organika dia lasa lavenona rehefa tratran'io hafanana io.
Ity dingana ity dia mety haharitra 1 ka hatramin'ny 4 ora., arakaraka ny fahadiovan'ny fandaharana, amin'ny farany dia manadio ny lafaoro amin'ny lamba mando isika ary manangona ny lavenona. Amin'izany fomba izany, ny fampiasana vokatra simika mety hanimba ny fahasalamana rehefa mandeha ny fotoana.
Tombontsoa amin'ny lafaoro sy ny maha zava-dehibe ny tontolo iainana
Ny fananana lafaoro ahafahantsika mitsitsy fotoana sy vola, ny fanaovana pyrolysis dia mitondra ireto tombontsoa manaraka ireto:
Tsy isalasalana fa ny tombontsoa lehibe indrindra dia ny fanadiovana tena.
Ekolojika izy io satria mampihena ny fampiasana vokatra simika hanadiovana ny lafaoro.
Araka ny kajy ny vidin’ny herinaratra ao amin’ny Vaomieram-pirenena momba ny angovo dia ambany ny vidin’ny jiro satria 0,39 cents fotsiny no lany.
Izy io dia vita amin'ny fitaovana avo lenta indrindra mba hiarovana fanaka avy amin`ny mari-pana ambony.
Rehefa mahatratra ny mari-pana 500 °C ny lafaoro, mihidy ny varavaran'ny lafaoro ary manadio ny tenany ny lafaoro mba hisorohana ny loza.
Mahazo aina sy mahomby kokoa noho ny lafaoro mahazatra izy ireo.
Azo atao ny programa hanombohana pyrolysis amin'ny fotoana izay ambany indrindra ny vidin'ny herinaratra.
Zava-dehibe ny pyrolysis satria manampy amin'ny fanaraha-maso ny fahalotoan'ny rivotra mifandray amin'ny fandoroana.. Izy io koa dia manampy amin'ny fampihenana ny fako miditra sy ny famokarana fako sterile, izay manitatra ny fiainan'ny fanariam-pako ary manatsara ny kalitaon'ny fanariam-pako. Farany, fomba iray ihany koa hanovana ny ampahany amin'ny fako ho solika azo tehirizina sy azo entina.
Mikasika ny pyrolysis ny lignin, singa iray amin'ny hazo ihany koa, dia mamokatra karbaona aromatika sy votoaty karbônina ambony kokoa, eo amin'ny 55% amin'ny cellulose ary 20% amin'ny menaka hazo, 15% ny sisa tavela ary 10% ny gazy.
Raha toa ka pyrolyzé ny biomass ala, dia misy fiantraikany lehibe amin'ny vokatra aterany ny fananany. Ohatra, ny andraikitry ny hamandoana dia ny fampihenana ny vokatra azo avy amin'ny fizotry ny fandoroana satria ilaina ny hafanana mba handotoana ny rano ary koa ny famokarana karbônina marefo kokoa noho ny rehefa manana votoaty hamandoana ambany kokoa ny biomass. Noho izany, soso-kevitra ny hanakaiky ny 10% ny hamandoan'ny biomass.. Misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny karbônina hoforonin'ny pyrolysis koa ny hakitroky ny famatsiana voalohany, ary ny sisa tavela amin'ny ala dia atolotra ho an'ny karbaona avo lenta.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny pyrolysis sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » pyrolysis
ampahany amin'ny sela